» “Waa Nin Iska Ciyaaraya” Faroole Oo Dhulka Ku Jiidey Cabdiwali Gaas
“Waa Nin Iska Ciyaaraya” Faroole Oo Dhulka Ku Jiidey Cabdiwali Gaas
Madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland, Cabdiraxmaan Faroole, oo wariyaasha kula Hadlay Magaalada Garowe ayaa wuxuu dhaleeceyn uu dusha uga tuurey Cabdwali Gaas.
Wuxuu ku eedeeyey Madaxweynaha Puntland ee hada Kursiga ku fadhiya in uusan diyaar u aheyn inuu la dagaalamo Kooxaha Al Shabaab iyo Daacish, oo fara kulul ku haya deegaanada uu ka arrmiyo maamulkaas.
Senator Faroole, oo hada ka tirsan Aqalka sare ee Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa wuxuu sheegay in Gaas, uusan la dagaalami doonin Al Shabaab iyo Daacish, hadda iyo mustaqbalka, islamarkaana qorshihiisa aysan kamid ahayn.
Wuxuu yiri Faroole: “Cabdiwali Gaas, qorshaha uguma jirto inuu la dagaalamo Al Shabaab iyo Daacish, marka waa nin iska ciyaaraya, oo ku jira Dhamaashaad, waana tusaale in uusan si kulul uga hadal weerarada labada koox.
Wuxuu hadalkiisa ku daray: “Marka Cabdiwali iyo kooxdiisa, waxay yihiin kuwa aanan xooga saareyn sidii ay dhulka Puntland looga sifeen lahaa kooxaha Al Shabaab iyo Daacish, waxaana umaleynayaa inay ku fashilmeen.
Sikastaba, hadalka kasoo yeerey Madaxweynihii hore ee Puntland ayaa wuxuu umuuqdaa mid Olale Siyaasadeed, maadaama uu gabaabis yahay muda xileedka Cabdiwali Gaas, islamarkaana doorasho cusub ay soo dhaw dahay.